सोनिकासंग गहिरिएको पारसको सम्बन्ध यसरी टुंगियो, पारसले खोले बास्तबिकता – Everest Pati
सोनिकासंग गहिरिएको पारसको सम्बन्ध यसरी टुंगियो, पारसले खोले बास्तबिकता
काठमाडौं। राजतन्त्र उहिले बाजेकै पालामा फालेता पनि पुर्व राजपरिवारको कृयाकलापको अझै चर्कै बहस र चर्चा हुने गर्दछ। त्यसैमाथी पुर्व युबराज पारस मिडियाबाट दुर हुन सकेका छैनन् । उनको चर्चा राम्रा कुरा भन्दापनी उनको हर्कतका बिषयमा बाक्लै मसला पाउछ मिडियाले। उनि घरिघरि विवादमा अाउने गरेका छन् । लकडाउनको कारण पोखरामा फसेका पूर्व युवराज पारस शाह तेश्रोचोटि फेरि हृदयाघा’तको शिकार भएको खबर झू’ठो सावित भएकाे छ ।
उनकाे हृदयघा’तकाे खबर चलेकाे हल्ला मात्रै फैलिएकाे प्रस्ट भएकाे छ । हिजो रातभर र दिनभर ताल किनारको होटलमा चुल्हो चौको जोडेर खुशियालीमा भयँकर पार्टी चलेकाे थियो । हिजो मध्यरात १२ बजेर ३६ मीनेट जाँदा ब्रेक अप फाईनल्ली; फृ एट लास्ट भनेर फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा उनकाे परिवारसँग सम्बन्ध चिसिएकाे कुरा पटकपटक मिडियामा अाएकाे थियाे । युट्युबमर सोनिका रोकायासङ्ग लिभिङ्ग टुगेदरमा रमाउदै आएका पारसको आफ्नो घरपरिवारसङ्ग राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने खबर आएतापनी यी दुबैले खुलेर यश बिषयमा भने हो भनेका थिएनन् । छोरा हृदयेन्द्र, छोरीहरु पूर्णिका र कीर्तिका हुर्किसकेको अवस्थामा उनले चाहेर पनि पत्नी हिमानीसङ्ग कानूनी रूपमा छुट्न सम्भव छैन । बरु सोनिकासङ्ग भने सम्पूर्णतस् अलग भएको खु*लासा उनी आफैले गरेका छन् । पछिल्लाे समयमा उनकाे सम्बन्ध वि’च्छे’दकाे हल्ला पनि चलिरहेकाे छ।
लकडाउनले इच्छाकामना माता माईको मन्दिर निर्माणको काम प्रभावित
०७७ वैशाख २७ गते शनिबार ई. स. २०२० मे ०९ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य